Astaamaha cusub ee Adobe Labs waxay noqon karaan CMS-ka mustaqbalka | Abuurista khadka tooska ah
Astaamaha cusub ee Adobe Labs waxay noqon karaan CMS-ka mustaqbalka
Ciise Arjona Montalvo | | Naqshadeynta Webka, WordPress
Abuuritaanka waxyaabaha ku jira Websaydhka ayaa noqon kara mid daal badan, laakiin Adobe wuxuu qabaa inuu koodhkii dillaacay oo wax badan ka sii fiicnaan karaan. Mashruuc cusub oo ah Adobe Labs Kaliya ma ahan inuu isku dayayo inuu naga caawiyo hal-abuurnimo, isagaa ah Waxay sidoo kale naga caawineysaa abuuritaanka nuxurka dhowr warbaahin.
Marka hore waxa ay qabato waa 'Qoraaga Smart' ama lagu tarjumay Spanish 'Smart Authors' iyadoo la adeegsanayo qoraalka la gelinayo, ka dibna qaado waxyaabaha la xiriira iyo sawirrada kaa caawinaya sameynta waxyaabaha aad rabto inaad daabacdo. Sida loo qoray, sawiro iyo kuwa kale fariimaha pop-up dhinaca bidix ee waqtiga dhabta ah, waxaana lagu dari karaa jiidis iyo daadi maqaalka ama boostada waqtiga dhabta ah.
'Soo Koobid Smart' waxay ka caawisaa abuuritaanka waxyaabo loogu talagalay kanaallo badan si fudud. Boostada balooggu si fiican ugama shaqeyn karto ogeysiisyada riix o ololeyaal emayl, sidaas darteed Adobe Labs wuxuu abuuray dariiq gacan ka geysanaya yareynta waqtiga marka loo baahdo.
Markaad buuxiso gelitaanka, 'Soo Koobid Smart' nuqul ka samee si loogu isticmaalo meelo kale. Waxay ku saabsan tahay garashada qoraalka siyaado ah oo si fudud loo jari karo. Waxaad sidoo kale gacanta ku haysaa hawsha waqti kasta, sidaa darteed waxba la goyn maayo ogolaanshahaaga.
'Isbadal caqli badan' waa kaabis in la sameeyo soo koobid wanaagsan oo ku saabsan waxaad qortay, oo ogolaatay faafiyaan isbeddelada qoraalka muhiim u ah noocyada kale. Tusaale ahaan, waad awoodaa maaree kala duwanaanshaha emaylka olole iyada oo aan loo baahnayn in mid kasta gacanta lagu saxo, taas oo fureysa hab lagu xakameeyo khaladaadka.
In kasta oo isbeddeladani ay ku wajahan yihiin iibiyeyaasha, oo ay ku jirto waji hore beta, waxaan ogaanay sida Adobe uu tan ugu adeegsan karo wax aad u ballaadhan mustaqbalka dhow. Waxaa laga yaabaa in CMS muhiim ah sida WordPress Waa inay ka yara walaacaan waxa Adobe ka shaqeynaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Naqshadeynta Webka » WordPress » Astaamaha cusub ee Adobe Labs waxay noqon karaan CMS-ka mustaqbalka